Bocas Bali Luxury Water Villas | Ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke Bocas del Toro - Luxury Hotels Panama
Ụzọ mgbapụ okomoko nke onwe nke Panama
Na-emepe ọzọ na Septemba
Ndị okenye ụlọ ezumike 16+
Nri Epicurean na ihe ọṅụṅụ gụnyere
Enweghị kagbuo ma ọ bụ gbanwee ụgwọ
“Idi ndụ bụ ihe na-adịghị ahụkebe n'ụwa. Ọtụtụ ndị mmadụ dị, nke ahụ bụ naanị. " - Oscar Wilde
Onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Andres Brenes, onye a kacha mara amara maka imepụta ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha nwee mmekọahụ n'ụwa, emepụtala ọmarịcha ihe ọzọ na-adọrọ adọrọ. N'ime anya Bocas Town nke mmụọ dị na Bocas Del Toro, Panama, bụ Balinese pụrụ iche sitere n'ike mmụọ nsọ pụọ na mmiri, Bocas Bali, nke na-ama ebe ntụrụndụ kacha dị egwu n'ụwa. Onye ọbịa nke charismatic anyị bụ Scott Dinsmore na-eme ka ndị ọbịa anyị nwee ahụmihe na-ekpo ọkụ na nke agaghị echefu echefu, bụ ndị na-anụ ụtọ ngwakọta anyị na-adịghị ahụkebe na ọnọdụ Caribbean mara mma.
Nke a pụrụ ichetụ n'echiche
Ewuru n'elu mmiri na Stilts
Site n'okporo ụzọ ụgbọ mmiri sara mbara ozugbo banye n'akụkụ osimiri Kupu-Kupu, na-egosipụta Bar Tipsy nke ama ama n'oge adịghị anya. Mee ka anyanwụ na ikuku dị elu wee hụ na ị ga-ahụ ebe ọdọ mmiri dị ka steepụ na-eduga na mmiri kristal na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ruo mgbe ebighị ebi maka igwu mmiri n'ehihie.
Ndị ọbịa anyị na-anụ ụtọ 1,100 square ụkwụ nke ọmarịcha ndụ alfresco, na-ezu ike na stilts n'ofe Osimiri Caribbean. Na mgbakwunye na ọdọ mmiri na mbara ala nkeonwe, Villalọ ọ bụla nwere akwa akwa nwere akwa akwa mara mma yana ọmarịcha ihe osise ncha a kpụrụ akpụ. N'ụdị Balinese ọdịnala, ndị na-ese ihe raara onwe ha nye ihe karịrị awa 1,000 n'ịkpụ ihe ụlọ osisi teak nke ọ bụla.
Nri & Cocktails
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ abụọ
Ahụmịhe iri nri gị na The Elephant House na Coral Café tụpụrụ ụgwọ ego ọdịnala niile maka ịkwado mpaghara, ihe ndị dị n'ugbo na nri mmiri mpaghara sitere n'aka ndị ọkụ azụ Bocas. N'ike mmụọ nsọ site na griin haus na saịtị anyị, nna ukwu anyị siri nri ọhụrụ efere maka nri ọ bụla.
Na-egwu mmiri ma ọ bụ snorkel ozugbo site na villa mmiri mmiri gị. Ma ọ bụ jiri ụgbọ mmiri kayak ma ọ bụ paddleboard chọpụta osimiri Caribbean gbara agwaetiti anyị gburugburu. Maka ahụmịhe snorkeling zoro ezo, obere agwaetiti ahụ dị n'ofe obodo ahụ na-enye ndụ mmiri na-adọrọ adọrọ.
Mmiri cerulean nke Bocas Bali na-ekpo ọkụ kwa afọ. Mana ọ bụrụ na ị na-ahọrọ mmiri dị ọhụrụ karịa mmiri nnu, ọdọ mmiri ụlọ anyị mara mma bụ ebe dị jụụ maka ịsa ahụ.
Nkà na ihe owuwu
Na Rich Balinese Undertones
Obere agwaetiti dị na Bocas Del Toro nwere ike ịbụ ebe ikpeazụ ị ga-atụ anya inweta ọmarịcha ụlọ a na-eji ncha ncha ejiri aka kpụrụ ya na ihe osise okike nwere ton abụọ na-achọ ụlọ osisi alfresco mara mma. Maka ndị hụrụ nka n'anya - ọtụtụ ihe ịtụnanya na-echere.
Na-echebe anyị Coral Reefs
Anyị nwere mmasị n'ichekwa ịma mma nke àgwàetiti onwe anyị na mmiri ya. Bocas Bali dị 100% kwụsịrị grid. Ọwa mmiri ozuzo na-echekwa galọn mmiri ozuzo 55,000 iji nye mkpa mmiri dị ọcha anyị niile. Na anyanwụ na-emepụta ọkụ eletrik anyị n'ụdị ike anyanwụ.